Soo-saaraha sawir-qaade ugu fiican ee caadiga ah | Rayson
Rayson ee Rayson Soonaha Soojiiladeed, Housha Road, Shishin, aagag tikniyoolajiyadda sare, Guangdong, Shiinaha. Alaabada aasaasiga ah ee alaabada la awoodi karo ayaa la awoodi karaa oo loo rogay soo-saareyaasha soo-saareyaasha guga ee Bonnell. La awoodi karo oo lagu awoodi karo ayaa kor u kacay joodariga guga ee Bonnell ee u gaarka ah, waxaa soo saaray Rayson uu aad ugu caan baxay macaamiisha. Markaad xidhaneyso badeecadan tayada leh, adkaanta xad-dhaafka ah ama xasilloonida kuwaas oo keeni doona kalsoonida qofka lama dareemi doono. La awoodi karo oo la awoodi karo Waxay leedahay hoos udhaca, kaas oo loo isticmaalo gudaha.
Idaacadda Rayson, hagaajinta teknolojiyadda iyo hal-abuurka ayaa ah faa'iidooyinkeena aasaasiga ah. Tan iyo markii la aasaasay, waxaan diirada saareynay horumarinta alaabada cusub, hagaajinta tayada wax soo saarka, iyo u adeega macaamiisha. Sawirrada ugu fiican waxaan sameyn doonaa inta karaankeena ah si aan ugu adeegno macaamiisha inta lagu gudajiro howlaha oo dhan qaabeynta badeecada, R & D, si loo keeno. Kusoo dhawow si aad noola soo xiriirto wixii macluumaad dheeri ah ee ku saabsan sheygayaga cusub ee shey cusub ama shirkadeenna. Waxay saameyn weyn ku yeelan doontaa heerka kalsoonida.